काँग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बलियो हुँदै, पूर्वराजालाई शुभसंकेत | Citizen Post News
काठमाडौँ । अहिले नेपाली काँग्रेसको बहुप्रतिक्षित महासमितिको बैठक जारी छ । महासमिति बैठकका सहभागीहरुले पार्टीलाई सवलीकरण गर्न थुप्रै एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपी काँग्रेसको यो महासमितिको बैठकले के कस्ता निर्णय पारित गर्ला ? त्यसप्रति सवैको साचो बढेको छ । आज महासमिति बैठकको चौथो दिन चलिरहेको छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको विवाद पनि चलिरहेको छ । जसका कारण प्रतिवेदन पेश हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर, प्रभावशाली स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काले समातेको लाइन लिएका संशाक कोइरालाको एजेण्डाले महसमितिको बैठकमा राम्रै स्थान लिएको छ । बैठक सुरु भएसँगै वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बनाउन हस्ताक्षर संकलन अभियान चलिरहेको छ ।
अभियानमा हालसम्म करीब ८०० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेका सो अभियानका अभियन्ता दिवस ढुंगेलले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा महासमिति सदस्यबाट काँग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ । तेस्रो दिन अर्थात सोमबार बसेको बैठकमा डोल्पाका महासमिति सदस्य देवीकृष्ण न्यौपानेले ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बी भएको मुलुकको संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै महासमिति बैठकमा यस विषयले छलफलका लागि स्थान पाउनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै बाँकेका महासमिति सदस्य निरञ्जन सिजापतिले हिन्दू राष्ट्रलाई छोडेर मुलुक धर्म निरपेक्षतामा जानु उचित नभएको टिप्पणी गरे । रामेछापका महासमिति सदस्य लक्ष्मण बस्नेतले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको स्थानमा धर्म निरपेक्षता षडयन्त्रपूर्वक आएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
शुक्रबारदेखि यहाँ शुरु भएको महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । शनिबार उद्घाटनपछि बन्दसत्र शुरु भएको थियो । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनीत महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपाली काँग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा स्थापित भएको खण्डमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राजा हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने खतरा समेत बढेको छ ।
एक हजार ७ सय सहभागि रहेको बैठकमा करिब ८०० जनाले सो अभियानमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । के यो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि काँग्रेसको ग्रिन संग्नल हो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।